Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo si dag dag ugu ambabaxay Dalka Ethoopiya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo si dag dag ugu ambabaxay Dalka Ethoopiya
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo si dag dag ugu ambabaxay Dalka Ethoopiya
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saakay u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasoo uu uga qeyb geli doono shirka 25aad ee Madaxda Urur Goboleedka IGAD.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa la filayaa inuu shirkaas khudbad ka jeediyo shirka, oo uu kaga hadlo arrimaha howl galada ee ka bilowday gobolada dalka, isagoo kulamo gaar gaar ah la yeelan doono madaxda dalalka deriska.
Ajandayaasha shirka IGAD ayaa qeyb ka ah arrimaha ammaanka Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab, waxaana arrimaha ugu weyn lagaga hadlayana ay tahay qorshaha xasilinta dalka ee ka bilowday gobolada dalka.
Ciidamo ka socda dalalka deriska oo ku howl galaya howl galka Midowga Afrika e AMISOM ayaa ka bilaabay gobolada dalka howl galo ka dhan ah Al-Shabaab, iyadoo ciidamada Itoobiya ay duulaankan qeyb weyn ka qaadaneyso.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ah markii labaad oo safar ugu ambabaxo magaalada Addis Ababa, tan iyo intii xilkan loo magacaabay bishii December ee sanadkii hore, waxaana horay booqasho ugu soo maray wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya.
Next articleDEG DEG: Ciidamada huwanta oo lawareegay gacan kuheynta xarunti Al- Shabaab ee dagmada Buula Burde